ဆရာမင်းနဒီခ၏ ပိုးသားရောင်ပင်လယ်လမ်း ကဗျာစုစည်းမှုစာအုပ် ထွက်ရှိ။
ဆရာမင်းနဒီခ၏ ပိုးသားရောင်ပင်လယ်လမ်း ကဗျာစုစည်းမှုစာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ
မင်းနဒီခ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏အသက်(၉၃)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲတက်ရောက်
9:51 PM Book, My Activities, ထွက်ရှိပြီးစာအုပ်များ, မင်းနဒီခ၏ လှုပ်ရှားမှုများ No comments
ဆရာ မင်းနဒီခ၏ ပိုးသားရောင်ပင်လယ်လမ်း ကဗျစုစည်းမှု စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ၁၃.၅.၂၀၁၂ နှစ်တွင် ဆရာ မင်းနဒီခ၏ နေအိမ်ဖြစ်သော (၁၉) လမ်း (၈၉)လမ်းနှင့် လမ်း (၉၀) ကြားရှိ ကောင်းမြင့်စံ စတိုးဆိုင်ခြံဝင်းအတွင်း၌ နံနက် (၉) နာရီအချိန်မှ စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆရာ စိုးဘားဒိုင် မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ဆရာ မောင်ကြည်သာ(တောင်တွင်း)၊ ဆရာနေမျိုး၊ ဆရာ မောင်စိုးသစ်၊ ဆရာ စိုးနိုင်(မန္တလေးတက္ကသိုလ်) တို့မှ အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ကြပြီးနောက် ဆရာ မင်းနဒီခ မှ ပိုးသားရောင်ပင်လယ်လမ်း ကဗျာစုစည်းမှုစာအုပ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကာ အခမ်းအနား ပထမပိုင်းအစီအစဉ် ကို နံနက် (၁၁) နာရီခန့်မှာ ခေတ္တရပ်နားခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များကို ထမင်း၊ ဟင်းများဖြင့် ဧည့်ခံခဲ့ပါတယ်။
အခမ်းအနား ဒုတိယအစီအစဉ်အရ တက်ရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များထဲမှ ကဗျာဆရာများဖြစ်ကြသော ဆရာ ကလင့်(မန္တလေး)၊ ဆရာ ထွန်းလင်းသစ် (ကန့်ဘလူ)၊ ဆရာ မောင်ဆွေသစ် (မန္တလေး)နှင့် ဆရာ ထွန်းလွင်သွယ် (ဆူးဖြူရိပ်) တို့မှ ဆရာ မင်းနဒီခ၏ ပိုးသားရောင်ပင်လယ်လမ်း ကဗျာစုစည်းမှုစာအုပ်ထဲမှ မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် ကဗျာများကို ရွေးချယ်ရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့နောက် ဆရာ ဆွေနိုင် မှ ဆရာ မင်းနဒီခ ၏ ပိုးသားရောင်ပင်လယ်လမ်း ကဗျာစုစည်းမှု စာအုပ်ထဲမှ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော မိသားစုကဖေးရဲ့ လွတ်နေသော ထိုင်ခုံလေးတစ်လုံးအကြောင်း ကဗျာကို ဂစ်တာဖြင့် ရွတ်ဆိုပြခဲ့ပြီး ညနေ (၃) နာရီခန့်တွင် အခမ်းအနားရုတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ယခုပွဲကို မန္တလေးမြို့ရှိ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာများ၊ သတင်းထောက်များ အပါအ၀င် ဧည့်သည်တော် (၈၀) ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆရာမင်းနဒီခ၏ ပိုးသားရောင်ပင်လယ်လမ်းကဗျာစုစည်းမှု စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှ အမှတ်တရပုံရိပ်အချို့
မင်းနဒီခ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏ အသက် ( ၉၃ ) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲတက်ရောက်
8:22 PM My Activities, မင်းနဒီခ၏ လှုပ်ရှားမှုများ No comments
ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏ အသက် (၉၃) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကို အောင်ပန်းမြို့ မဟာဂန္ဓာ၈ုံကျောင်းတိုက်၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခမ်းအနားသို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ဆရာ ကိုလေး(အင်းဝဂုဏ်ရည်)၊ ဆရာ မောင်သာနိုး နှင့် ဆရာ မောင်သင်းခိုင် တို့တက်ရောက်လာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပျင်းမနား၊ ပြင်ဦးလွင် နှင့် ကျောက်ဆည်မြို့တို့မှ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာများ အများဆုံးတက်ရောက်လာကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာများ သမဂ္ဂ၊ အလယ်ရိုးမ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာများအသင်းမှ ကဗျာဆရာများနှင့် အထက်မြန်မာပြည် စာရေးဆရာများအသင်းမှ စာရေးဆရာများက သ၀ဏ်လွှာများဖတ်ကြားပြီး ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာအား ဂါရ၀ပြုခဲ့ကြပါသည်။
ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာ၏ အသက်(၉၃) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲမှ အမှတ်တရ ပုံရိပ်အချို့
ပိုးသားရောင် ပင်လယ်လမ်း ကဗျာစုစည်းမှု စာအုပ်ထွက်ပြီ။
8:52 PM Book, My Activities, ထွက်ရှိပြီးစာအုပ်များ, မင်းနဒီခ၏ လှုပ်ရှားမှုများ No comments
ဆရာမင်းနဒီခ၏ ပိုးသားရောင်ပင်လယ်လမ်း ကဗျာစုစည်းမှု စာအုပ်ထွက်ရှိပါပြီ။ ကဗျာ ပုဒ်ရေ ( ၆၄ ) ပုဒ်ပါဝင်ပြီး၊ ဆရာ နေမျိုး မှ အမှာစာရေးသားပေးထားပါတယ်။ ကြယ်နီ စာအုပ်တိုက်မှ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ချိထားပါတယ်။
8:42 PM Mother Poem, Poem, ကဗျာ, အမေကဗျာ No comments
အမေသီချင်းကို အကျယ်ဆုံးတီးဖို့ ဘယ်ကီးနဲ့ ဆိုရမလဲ
အမေကဗျာကို ပီအောင်ဖွဲ့ဖို့ ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ ရေးရမလဲ
အမေရုပ်ရှင် သရုပ်ပီပြင်ဖို့ ဘယ်ဇာတ်ညွန်းနဲ့ ရိုက်ရမလဲ
အမေပန်းချီကား သက်ဝင်ထင်ရှားဖို့ ဘယ်ဆေးနဲ့ ခြယ်ရမလဲ
အမေပန်းပု ပီအောင်ထုဆစ်ဖို့ ဘယ်ဆောက်နဲ့ ထွင်းရမလဲ
ဘယ်အရာကများ အမေလို့ တူအောင် တုပနိုင်ခဲ့သလဲ
သက်ရှိတွေရှိသမျှ အမေတွေ ရှိနေမယ်
အမေတွေ ရှိနေသမျှ သက်ရှိတွေရှိနေမယ်
အမေဟာ ကမ္ဘာဦးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ အနန္တမေတ္တာရှင်တပါး
အမေ့စကားဟာ ခွန်အား အမေ့စကားဟာ တရား
ကမ္ဘာတည်သရွေ့ အမေရှင်သန်နေတယ် အမေ
8:40 PM Mother Poem, Poem, ကဗျာ, အမေကဗျာ No comments
ရောက်သလား မေးတော့ မရောက်ဘူး
ရေစီးတစ်ခါ ရေသာတစ်လှည့်နဲ့ဗေဒါမ ကမ်းကပ်ခဲ့ရသလို
ဒီတစ်ခါ အမေနေ့မှာ အမေ့ကို ကဗျာနဲ့ ကန်တော့ဖို့
ချစ်ခြင်းတွေ ပင်လယ်တစ်ခုစာ ပွေ့ပိုက်လို့
နေ၊ လ နဲ့ ကမ္ဘာ
8:38 PM Mother Poem, Poem, ကဗျာ, အမေကဗျာ No comments
အဖေနဲ့ အမေက အလယ်မှာ
အဖေ့ဘေးမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်
သားလေးယောက်မှာ ဘယ်တစ်ယောက်မှ အမေ့ရင်ကို မီးမတောက်စေခဲ့ပေမဲ့
အတောင်အလက်တွေစုံလို့ ဆံထုံးနောက် သျှောင်တွေပါ
အချိန်တန်လို့ တစ်ယောက်တစ်လမ်းစီ ခွဲခွာ
အမေရယ် တစ်ယောက်တည်း ယောင် ယောင်ပြီး နိုးလာတဲ့ညတွေမှာ
သားကြီးရေ သားငယ်ရေဆိုပြီး ရှာများ ရှာနေမလား
ဒီအချိန်ဆို သားငယ်တွေ ဆော့ကစားနေကျလို့
အတိတ်ကို ပြန်လွမ်းရင်း အိမ်တံခါးဝမှာ ထိုင်ပြီးငေးနေမလား
ခွင့်လွှတ်ပါ အမေရယ် အမေနဲ့ ဝေးနဲ့အခါ
ဘယ်လောက် ကောင်းကောင်း ရင်ငွေ့မလုံပါဘူး
ညတိုင်းယောင်ယောင်ပြီး ပြောတတ်တဲ့ အဖေ့စကားသံ
ဘုရားဝတ်ပြုတတ်တဲ့ အမေ့ရဲ့ တရားသံ
အိပ်ယာထဲအထိ ဆော့ကစားနေတတ်တဲ့ ညီလေးတွေရဲ့ အသံ
နားထဲ အခါခါပြန်ကြား ယောင်ယမ်းပြီး ဘေးနားစမ်းမိတော့
နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မောကျနေတဲ့ ဇနီးနဲ့သားကို တွေ့တိုင်း
ကိုယ်တိုင် မိဘ ဘ၀ရောက်တော့မှ
သား သမီးနဲ့ ဝေးတဲ့ ဒုက္ခ
နားလည်တတ်ခဲ့ပါပြီ အမေရယ်။ ။
8:37 PM Mother Poem, Poem, ကဗျာ, အမေကဗျာ No comments
ဆည်းဆာဟာ အရောင်ဖျော့ဖျော့ပဲ ကျန်တော့တယ်။
အိပ်တန်းပြန်မယ့် ငှက်တစ်ချို့ရဲ့ တောင်ပံခတ်သံဟာ
ခိုဖြူ ခိုဝါ သားချော့တေးနဲ့
မွှေးသိပ်လှည့်ပါလား အမေ။ ။
8:32 PM Mother Poem, Poem, ကဗျာ, အမေကဗျာ No comments
အမေ့ကို လွမ်းလို့ကျတဲ့မျက်ရည်က မိုးစက်
သားကို လွမ်းလို့ကျတဲ့ အမေ့ရဲ့ မျက်ရည်က ပင်လယ်
မေတ္တာတရားတွေ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ အမေ့အိမ်လေးကို
ရင်ရိပ်ဝေးမှ တမ်းတရတာ ရင်နာစရာ
မာနမှာ ယုံကြည်ရာ ထုဆစ်
အတ္တပေါ် ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် လေးတင်ပစ်ခဲ့
လေနှင်ရာ လွင့်ခဲ့တဲ့ နေ့များ
အမေ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ လက်ချောင်းတွေကြားက
လောကကြီးကို ခိုးကြည့်ရတာ မှောင်လွန်းတယ်
ပြန်လာမယ် အသေအချာ မသိပေမယ့်
အမေ့ ရင်ခွင်က ထာဝရဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးလေးဆီ
လမ်းတလျှောက် အလွမ်းတွေ ပြန်ကောက်ရင်း
သား ပြန်လာခဲ့ပါပြီ အမေ။ ။
10:20 PM Love Poem, Poem, ကဗျာ, အချစ်ကဗျာ No comments
တစ်ယောက်လန်းရင် တစ်ယောက်က နမ်းလို့
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ကောင်းကင်
10:19 PM Love Poem, Poem, ကဗျာ, အချစ်ကဗျာ No comments
သံသယတိမ်တိုက်တွေကို နားလည်မှုနဲ့ ဖယ်ရှား
၀မ်းနည်းမိုးသားတွေကို ဖြေသိမ့်ခြင်းလေပြေနဲ့ တွန်းထုတ်
မြတ်နိုးမှုဟာ ရေတွက်မကုန်နိုင်တဲ့ ကြယ်စင်များ
တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ နေရောင်လို ထွန်းလင်းစေ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ အနမ်း
10:17 PM Love Poem, Poem, ကဗျာ, အချစ်ကဗျာ No comments
အလွမ်းချင်းတူရင် အနမ်းချင်းလည်း တူရမှာပေါ့
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ လမ်းဟာ
ကိုလံဘီယာက ပို့လိုက်တဲ့နှင်းဆီရနံ့တွေနဲ့ သင်းပျံ့လို့
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရုပ်ရှင်ဟာ
တစ်ခန်းပြီး တစ်ခန်း အနမ်းချင်းဆက်လို့
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ သစ်ပင်ဟာ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ အင်္ကျီဟာ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ လမ်းက
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ သစ်ပင်အောက်မှာ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ အင်္ကျီကိုဝတ်ပြီး စောင့်ပါ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ အနမ်းတွေ မိုးလိုရွာလိမ့်မယ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ အင်္ကျင်္င်္ီ
10:13 PM Love Poem, Poem, ကဗျာ, အချစ်ကဗျာ No comments
နှစ်ခြမ်းကွဲနေတဲ့ ရင်ဘတ်တွေကို ပြန်စေ့ပေးဖို့
အကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့ ရင်တစ်စုံကို လုံခြုံမှုတွေပေးဖို့
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ အင်္ကျင်္ီလေးကို ၀တ်ဆင်ရင်း
ချစ်သူ ရယ်မော ပျော်ရွှင် နိုင်ပါစေ
တနင်္ဂနွေမိုးတိမ်က ဘယ်လိုခြိမ်း ခြိမ်းမရွာဘူး
ပက်ကြားအက်ရင်တစ်စုံရဲ့ တခုတ်တရ သတိရခြင်းများ
ဆာဟာရရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အိုအေစစ်လေးတစ်ခုပေါ့
အဲဒီလိုအလွမ်းနဲ့ တိတ်ဆိတ်စွာ ငါအော်တယ်
ချစ်ခြင်းတရားကို ဘယ်လိုပင်လယ်နဲ့ အငွေ့ပျံပြနေရဦးမှာလဲ
10:12 PM Love Poem, Poem, ကဗျာ, အချစ်ကဗျာ No comments
မင်းအတွက်ခူးထားတဲ့ ပန်းလေးတွေ ညှိုးနွမ်းမသွားသေးချိန်
အလွမ်းနဲ့ ပြန်ညှိထားတဲ့ ဂစ်တာတစ်လက်ရဲ့
မင်းအရိပ် မင်းအရောင်နဲ့ လင်းနေတဲ့ညလေး မှေးမှိန်မသွားသေးချိန်
နရံတံတိုင်းတွေ အထပ်ထပ်နဲ့ ဝေးကွားဖို့ပဲ နီးစပ်ခဲ့
နှောင်ကြိုးတွေ အထပ်ထပ်နဲ့ ရုန်းထွက်ဖို့ပဲ ချည်နှောင်ခဲ့
ဘယ်လိုရက်စက်မှုမျိုးက မင်းနှုတ်ခမ်းကို ချိုမြိန်စေခဲ့သလဲ
အသွေးအသားထဲ စိမ့်ဝင်နေတဲက သတိရခြင်းကို ကုစားဖို့
စစ်ရှုံးနေတဲ့ တောင်ကုန်းကို ပန်းနုရောင် အလံတစ်လက်လွင့်ထူဖို့
ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ချစ်ခြင်းတရားကို ရေလောင်းပေါင်းသင်ပေးဖို့
တစ်ပင်လုံး ဆွတ်ပျံ့နေတဲ့ ရနံ့အ၀ါ
သစ္စာတရားနဲ့ ယှက်ဖောက်ချိတ်ဆွဲထားသော ပန်းများ။
အဘိုးက အဘွားကို ပန်ပေးခဲ့တဲ့ အ၀ါ
အဖေက အမေ့ကို ခူးပေးခဲ့တဲ့ အ၀ါ
မေတ္တာတရားနဲ့ ထုဆစ်ပုံဖော်ထားသော ပန်းများ။
ဟော အခု တဒေါက်ဒေါက် နဲ့
ကျွန်တော့် ရင်ကို တံခါးခေါက်နေပြီ။
Shwe Mandalay Journal
မင်းနဒီခ ကဗျာဆိုဒ်မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဤဆိုဒ်ကို T & Z Technicians Group မှတာဝန်ယူတည်ဆောက်ပြီး 17.4.2012 ရက်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
သင့် E Mail လိပ်စာသာထားခဲ့ပါ။ ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်း Mail ဖြင့်ပို့ပေးပါမည်။
Min Nadi Kha
ဆရာ မင်းနဒီခ၏ ပိုးသားရောင်ပင်လယ်လမ်း ကဗျစုစည်းမှု စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ၁၃.၅.၂၀၁၂ နှစ်တွင် ဆရာ မင်းနဒီခ၏ နေအိမ်ဖြစ်သော (၁၉) လမ်း (၈...
မျှော်လေရာ မိုးကောင်းကင်သည် လရောင်အလင်းအောက်မှာဝေ့သီမှုန်ဝါးလျှက်။ တလက်လက်နှင့် လင်းလက်နေသည့် ကြယ်လေးတွေကို ကြည့်ရတာ ကြွေတော့မယ့် မျက်ရည်စက်...
အမေ လမ်းတလျှောက် အလွမ်းတွေပြန်ကောက်ရင်း အမေရှိရာ ပြန်ခဲ့ပြီ အမေ့ကို လွမ်းလို့ကျတဲ့မျက်ရည်က မိုးစက် သားကို လွမ်းလို့ကျတဲ့ အမေ့ရဲ့ မျက်ရည်က ပင...
ပင်လယ်များကို ဖြတ်သန်းခြင်း မင်းနဒီခ လူငယ်ဘ၀အမှတ်တရပင်လယ် ၁၉၈၁ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်။ အဲဒီနေ့က နေသာသလား၊ မိုးလေးတဖွဲဖွဲကျနေခဲ့သလား ကျွန်တော်မသိ...
တစ်ဘ၀စာအနမ်းလား တစ်ခဏတာအနမ်းလား အချစ်ချင်းတူရင် အလွမ်းချင်းတူလို့ အလွမ်းချင်းတူရင် အနမ်းချင်းလည်း တူရမှာပေါ့ အခုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ လမ်းဟာ ...
Download PDF (7)
Love Poem (37)
Mother Poem (5)
မင်းနဒီခ၏ လှုပ်ရှားမှုများ (3)
မင်းနဒီခ၏ ပိုးသားရောင်ပင်လယ်လမ်း ကဗျာစုစည်းမှုစာအုပ...
မင်းနဒီခ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏ အသက် ( ၉၃ ) နှစ်ပြည့်ေ...
ပိုးသားရောင် ပင်လယ်လမ်း ကဗျာစုစည်းမှု စာအုပ်ထွက်ပြီ...
Copyright © 2012, 17, Apiral မင်းနဒီခ | Template Design And Created By T And Z Technicians Group .
နည်းပညာနှင့်ပတ်သတ်သည်များလေ့လာလိုပါက T And Z Technicians Group သို့သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။